Wiil 19 jir ah oo ku geeriyooday shil gaari gobolka Minnesota -
Wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah ayaa ku dhintay shil gaari oo uu ku galay magaaladda Blaine ee gobolka Minnesota. Shilkan uu ku dhintay wiilkan 19 jirka ah, laba wiil oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa dhacay habeenkii Arbacada.
Haddaba shilkan gaari ee dhimashadda iyo dhaawaca leh ayaa ka dhacay halka ay iska jaraan labadda jid ee Jaamacadda iyo 85. Gaariga ay saarnaayeen wiilasha Soomaaliyeed iyo gaari kale oo weyn ahna gaadiidka xamuulka qaada ayaa isku dhacay saacadu markii ay ahayd 7:45 habeenimo, bilayska magaaladda Blaine ayaa sidaas sheegay.
Wiilka 19 jirka ah oo gaariga waday ayaa isagu ku geeriyooday goobta uu shilku ka dhacay isla markiiba, waa sida uu bilaysku sheegay. Labadda wiil ee iyagu ku jira xaallad dhaawac culus oo ay da’doodu jirto 12, iyo 13 jir ah ayaa ahaa rakaab, waxayna weli ku jiraan Xarunta Caafimaadka ee degmadda Hennepin oo kutaala magaaladdda Minneapolis.
Ninka darawalka ka ahaa gaariga kale ayaa isagu ah nin 41 jir ah oo ka yimi ama deggan magaaladda St. Paul, ayaa wax dhaawac ahi uusan gaarin.
Allaha u naxariiste Maxamed-Amiin oo ah wiilka ku geeriyooday shilkan gaari ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Muslimka ee ku yaala magaaladda Burnsville.
Shilkan dhimashadda iyo dhaawaca xun geystay ayaa waxaa baaraya bilayska magaaladda Blaine, Xafiiska ciidanka loo yaqaano Sheriff iyo Xafiiska Baadhitaanka Caafimaadka ee Goboleedka Minnesota.